BitCurrency စျေး - အွန်လိုင်း BTCR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitCurrency (BTCR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitCurrency (BTCR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitCurrency ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $214 313.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitCurrency တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitCurrency များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitCurrencyBTCR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000738BitCurrencyBTCR သို့ ယူရိုEUR€0.000629BitCurrencyBTCR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000564BitCurrencyBTCR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000676BitCurrencyBTCR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00665BitCurrencyBTCR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00468BitCurrencyBTCR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0165BitCurrencyBTCR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00277BitCurrencyBTCR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000985BitCurrencyBTCR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00103BitCurrencyBTCR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0166BitCurrencyBTCR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00572BitCurrencyBTCR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00405BitCurrencyBTCR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0552BitCurrencyBTCR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.125BitCurrencyBTCR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00101BitCurrencyBTCR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00112BitCurrencyBTCR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.023BitCurrencyBTCR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00513BitCurrencyBTCR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0783BitCurrencyBTCR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.874BitCurrencyBTCR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.286BitCurrencyBTCR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0542BitCurrencyBTCR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0204
BitCurrencyBTCR သို့ BitcoinBTC0.00000006 BitCurrencyBTCR သို့ EthereumETH0.000002 BitCurrencyBTCR သို့ LitecoinLTC0.00001 BitCurrencyBTCR သို့ DigitalCashDASH0.000008 BitCurrencyBTCR သို့ MoneroXMR0.000008 BitCurrencyBTCR သို့ NxtNXT0.0556 BitCurrencyBTCR သို့ Ethereum ClassicETC0.000104 BitCurrencyBTCR သို့ DogecoinDOGE0.209 BitCurrencyBTCR သို့ ZCashZEC0.000008 BitCurrencyBTCR သို့ BitsharesBTS0.0269 BitCurrencyBTCR သို့ DigiByteDGB0.0235 BitCurrencyBTCR သို့ RippleXRP0.00244 BitCurrencyBTCR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 BitCurrencyBTCR သို့ PeerCoinPPC0.00237 BitCurrencyBTCR သို့ CraigsCoinCRAIG0.328 BitCurrencyBTCR သို့ BitstakeXBS0.0307 BitCurrencyBTCR သို့ PayCoinXPY0.0125 BitCurrencyBTCR သို့ ProsperCoinPRC0.0902 BitCurrencyBTCR သို့ YbCoinYBC0.0000004 BitCurrencyBTCR သို့ DarkKushDANK0.23 BitCurrencyBTCR သို့ GiveCoinGIVE1.56 BitCurrencyBTCR သို့ KoboCoinKOBO0.164 BitCurrencyBTCR သို့ DarkTokenDT0.00068 BitCurrencyBTCR သို့ CETUS CoinCETI2.07
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 03:15:03 +0000.